Caafimaadka: Maandooriye | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Caafimaadka qabatinka
Isticmaalka qasabka ah inkasta oo cawaaqib xumo ay tahay astaamaha balwadda. Taasi waxay ka dhigan tahay xitaa marka balwadu ay sababto shaqo lumis, cilaaqaadyo burburay, jahwareer dhaqaale, dareemid niyad jab iyo xakameyn la'aan, weli waxaan mudnaanta siineynaa dhaqankeena balwadda ama walaxda ka sareysa wax kasta oo nolosheena ah.
Qeexitaanka gaaban ee gaaban ee mukhaadaraadka ay bixiso Jaaliyada Maraykanka ee Daaweynta Maandooriyeyaasha waa:
Cudurradu waa cudur asaasiga ah, dabadheeraad ah ee abaalmarinta maskaxda, dhiirigelinta, xasuusta iyo wareegga la xidhiidha. Kala soocida wareegyadani waxay keenaysaa calaamado nafley, maskaxeed, bulsho iyo ruuxba leh. Tani waxay ka tarjumeysaa shakhsi ahaan dabiiciga ah ee raadinta abaalmarinta iyo / ama gargaarida isticmaalka maandooriyaha iyo dabeecadaha kale.
Ku-dhufashada waxaa lagu gartaa awood la'aan in ay si joogta ah u diidaan, laxaad la'aanta xakamaynta akhlaaqda, xakameynta, aqoonsi la'aanta dhibaatooyinka muhiimka ah ee dabeecadaha qofka iyo xiriirka dadka dhexdooda, iyo jawaab-celinta niyadeed. Sida cudurrada kale ee joogtada ah, macaamiishu waxay inta badan ku lug leeyihiin wareegyo dib-u-soo-kabasho iyo is-dhaafsi. Iyadoo aan lagu daaweyn ama ka qayb qaadashada waxqabadyada ka-soo-kabashada, macaamil-darrada ayaa horay u socota waxayna keeni kartaa naafonimo ama dhimasho goor hore ah.
Bulshada Maraykanka ee Daawada Maandooriyadu waxay kaloo soo saartaa Qeexitaan Dheer. Tani waxay ka hadlaysaa maandooriyaha si faahfaahsan oo loo heli karo halkan. Qeexitaankii ugu dambeeyay waxaa dib loo eegay 2011.
Maandooriyuhu waa natiijada geedi socodka isbeddelada nidaamka abaalmarinta maskaxda. Nidaamka abaal-marinta ee maskaxdeennu wuxuu isu beddelay inuu naga caawiyo inaan sii noolaano iyada oo naga dhigaysa inaan raadino abaalmarinno ama raaxo, iska ilaalinno xanuunka, iyo dhammaanba dadaalka ugu yar ama kharashka tamarta. Waxaan jecel nahay cibaaro, gaar ahaan haddii aan la kulanno raaxo ama aan iska ilaalino xanuunka dadaal yar. Cuntada, biyaha, isku xirnaanta iyo galmada ayaa ah abaalmarinta aasaasiga ah ee aan u badalnay raadinta si aan u badbaado. Diirad saaridooda ayaa kobcisay markii baahiyahaani yaraadeen, sidaa darteed waxaan la kulannaa raaxo markaan helno. Dabeecadaha noocan ah ee badbaadada ah dhammaantood waxaa wada dopamine dopamine, oo sidoo kale xoojiya dariiqyada neerfaha ee naga caawiya inaan baranno oo aan ku celino dabeecadaha. Marka dopamine uu hooseeyo, waxaan dareemeynaa dhiirigelin si aad noo dhiirrigeliso inaan raadino. In kasta oo rabitaanka abaalmarinta laga helo dopamine, dareenka raaxada ama raynraynta helitaanka abaalmarinta wuxuu ka yimaadaa saameynta neerfaha kiimikada dabiiciga ah ee maskaxda.
Maanta adduunkeenna tirada badan, waxaa nagu hareereysan noocyo 'supernormal' ah oo ah abaalmarinno dabiici ah sida farsamaynta, cuntooyinka qashinka badan ee kalooriga iyo qaawan ee internetka. Kuwani waxay rafcaan u yihiin maskaxda jacaylka maskaxda ee cusub iyo rabitaanka raaxo leh dadaal yar. Markaan waxbadan cunno, heerarkeena dareenkeena ayaa sare usii kacaya waxaanan la kulannaa dulqaad ama kicin la'aan heerarkii hore ee isticmaalka. Tani waxay markeeda soo koobaysaa baahida aan u qabno xoog badan si aan u dareemo qanac, xitaa ku meel gaar. Rabitaanku wuxuu isu beddelaa baahi. Si kale haddii loo dhigo, waxaan bilaabeynaa inaan 'u baahanahay' dabeecadda in ka badan inta aan 'jecelnahay' maadaama miyir la ', isbeddelada maskaxda ee la xiriira balwadda ay xakameynayaan dabeecadeena oo aan lumineyno rabitaankeenna xorta ah.
Abaalmarinta kale ee aadka loo shaqeeyay, ee 'dabiiciga' yar sida sonkorta saafiga ah, aalkolada, nikotiinka, kookaha, heroin sidoo kale waxay adeegsadaan nidaamka abaalmarinta. Waxay afduubtaan dariiqooyinka loo yaqaan 'dopamine' ee loogu talagalay abaalmarinta dabiiciga ah. Waxay kuxirantahay qiyaasta, abaalmarintaan waxay soo saari karaan dareen kacsan oo raaxo leh ama raynrayn ka badan tan khibrada leh ee abaalmarinta dabiiciga ah. Kordhinta xad dhaafka ahi waxay nidaamka abaalmarintayada ka tuuri kartaa isku dheelitirnaan. Maskaxdu waxay ku dhegi doontaa walax ama dabeecad kasta oo ka caawisa yareynta buuqa. Maskaxdeenu uma ay horumarin inay la qabsato culayskan sii kordhaya ee nidaamka dareenka.
Afar goor isbeddel maskaxeed ayaa dhacaya inta lagu jiro nidaamka mamnuucidda.
Marka hore waxaan 'u jilicsannahay' raaxaysiga caadiga ah. Waxaan dareemeynaa kabuubyo ku wareegsan raaxada maalinlaha ah ee naga farxin jirtay.
Maaddada ama dabeecadda balwadda leh waxay la shaqeysaa isbeddelka labaad ee ugu weyn, 'dareenka'. Tani waxay ka dhigan tahay halkii aan ku raaxeysan lahayn raaxo ilo badan, waxaan noqon doonnaa mid diirada saarey shayga aan rabno ama waxkasta oo ina xusuusinaya. Waxaan aaminsanahay inaan kaliya ku dareemi karno qanacsanaan iyo raaxo iyada oo loo marayo. Waxaan dhiseynaa dulqaad taasoo ah inaan laqabsanay heerka sare ee kicinta oo yareynaya raaxo la'aanta ka noqoshada.
Isbedelka saddexaad waa 'hypofrontality' ama daciifnimo iyo hoos u dhac ku yimaadda xuubcadaha hore ee ka caawiya ka hortagga dabeecadda oo noo oggolaaneysa inaan u naxariisanno kuwa kale. Wareegyada hore waa biriigaha qabta dabeecadaha aan u baahan nahay inaan xakameyno. Waa qeyb maskaxda ka mid ah halka aan nafteena u geli karno kabaha dadka kale si aan ula kulanno aragtidooda. Waxay naga caawineysaa iskaashi iyo isku xirnaanshaha dadka kale.
Isbedelka afaraad waa abuurista nidaam cadaadis ah oo dysregulated ah. Tani waxay naga dhigeysaa mid aan ciriiri lahayn walaaca iyo si sahlan u mashquuliya, taas oo keenta dabeecad aan fiicneyn oo is dulqaad leh. Waa ka soo horjeeda adkaysiga iyo awoodda maskaxda.
Natiijooyinka balwadda ayaa markaa ka soo noqnoqota isticmaalka daran ee maandooriyaha (aalkolo, nikotiin, hirowiin, kookain, digaagga iwm) ama dabeecad (khamaaris, qaawan internetka, ciyaaraha, dukaamaysiga, cunista cunnada qashinka ah) ee sababa isbeddelada qaabdhismeedka maskaxda iyo shaqada . Maskaxda qof kastaa wuu ka duwan yahay, dadka qaar waxay u baahan yihiin kicin ka badan kuwa kale si ay ula kulmaan raaxo ama u noqdaan kuwa balwad leh. Diirad saarida joogtada ah iyo ku celcelinta walax ama dabeecad gaar ah waxay maskaxda u muujineysaa in howshani ay muhiim u noqotay badbaadada, xitaa marka aysan aheyn. Maskaxdu waxay dib isu saxdaa si ay walaxdaas ama dabeecaddaas uga dhigato mudnaanta koowaad waxayna u qiimeysaa wax kasta oo kale nolosha qofka isticmaala. Waxay yareysaa aragtida qofka waxayna yareysaa tayada noloshiisa. Waxaa loo arki karaa nooc ka mid ah 'barasho ka badan' marka maskaxdu ku dhegto wareegga jawaab celinta ee dhaqanka soo noqnoqda. Si otomaatig ah ayaan uga jawaabeynaa, anagoo aan dadaal miyir qabin, wax nagu wareegsan. Tani waa sababta aan ugu baahanahay lafdhabarta hore ee caafimaadka leh si ay nooga caawiso inaan si miyir leh uga fikirno go'aanadeena isla markaana aan uga jawaabno qaab kor u qaadaya danaheena mustaqbalka fog oo aan kaliya ku boorinayn muddada gaaban.
Marka laga hadlayo balwadda sawir-gacmeedka qaawan ee internetka, kaliya aragtida laptop-ka, kaniiniga ama taleefannada gacanta ayaa calaamado u siinaya isticmaale in raaxada ay tahay 'agagaarka geeska' Rajada abaalmarinta ama ka-xannuunka xanuunka ayaa dhaqaajinaya dhaqanka. Kordhinta goobaha uu qofku horey uga helay "karaahiyo ama u dhigmid dhadhankiisa galmada" waa mid caadi ah oo ay soo mareen nus ka mid ah dadka isticmaala. Qabatinka buuxa ee dareenka caafimaad daruuri maahan inuu sababo isbedelka maskaxda ee soo saara dhibaatooyinka maskaxda iyo jireed ee dhibaatada leh sida ceeryaanta maskaxda, niyadjabka, go'doominta bulshada, kororka, welwelka bulshada, dhibaatooyinka kacsiga, feejignaan la'aanta shaqada iyo naxariis la'aanta dadka kale.
Caadiyan waxay ceyrsanayaan wax kasta oo firfircooni ah ee soo saarista dopamine waxay noqon kartaa mid qasab ah iyadoo bedeleysa waxa naga maskaxdeenu u aragto mid muhiim u ah ama u taagan si ay u noolaadaan. Maskaxyadani waxay isbeddelayaan iyaga oo saameeya go'aamada iyo anshaxa. Warka xun ayaa ah in horumarinta hal mukhadaraadka ay si fudud u keeni karto cabsida maadooyinka kale ama dabeecadaha kale. Tani waxay dhacdaa marka maskaxdu isku daydo in ay ka sii horeyso calaamadaha ka bixida iyagoo raadinaya raaxaysi wacan, ama dufanin iyo opioids, meelo kale. Dadka qaangaarka ah ayaa ah kuwa ugu nugul fekerka.
Warka wanaagsani waa tan sababtoo ah maskaxdu waa caag, waxaanu baran karnaa inaan joojino xoojinta dabeecadaha waxyeellada leh marka laga bilaabo bilawga cusub oo ka tago caadooyinka qadiimka ah. Tani waxay daciifisaa waddooyinka maskaxda ee hore waxayna ka caawisaa sameynta kuwa cusub. Ma fududa in la sameeyo, laakiin taageero, waa la qaban karaa. Kumanaan raga iyo haween ah ayaa ka soo kabsaday qabatimo waxayna ku raaxaysteen xoriyada iyo heshiis cusub oo noloshooda ah.
<< Kicin Kacsi Leh Qabatinka Dabeecadda >>